July 15, 2021 2303
अहिलेको जमा|नामा सामाजिक सन्जाल नच|लाउने को होला र ? यधपि गाउगाउमा समेत इन्टरनेट र मोबाईलको पहुचले लगभग बिकट ठाउमा पनि सामा`जिक सन्जालबारे सबैलाई ज्ञान छ र चलाउछन पनि । त्यस्तै मध्येको चर्चित हो टिक|टक जसबाट अहिले एक|सेएक मोडल कला|कारहरु जन्मिरहेका छन ।
यसभन्दा अगाडि पनि टि|कटक बनाईन तर कारणबश टिकटकले आइडी स’स्पेन्ड’ गर्दियो र अहिले दिदीको नामबाट खोले|को आइ|डीमा यिनका ५० हजार|भन्दा बढी पछयाउने छन । हरेक दिन नया भडियोले १० लाख भन्दा बढी भिउज हा’नेको छ । र अचम्म त के छ भने यिनी भिडियोमा जस्तो देखि`न्छिन नी रियल`मा पनि त्यो भन्दा बढी हसाउने गर्छिन ।
आजकल त गायक गायिका`ले पनि मोडल`हरु टिक`टक फलो`वर्सको आधार|मा रोज्ने गर्छन । यसै टिकटकलाई सही सदुपयोग गरेर आफूस“ग भएको टयालेन्ट प्रस्तुत गरि`रहेकी छिन यि ८ बर्षिय सानी नानीले । देख्दा मात्र ८ बर्षकी तर अभि`नयमा ठुला ठूला मान्छेहरु पछाडि छाड`दिन्छिन ।
बुढीका अभि`नय गरेर टिक|टकमा भाईरल बनेकी यि हुन मयुर बस्नेत । आज पनि पहिलो अन्तरबार्ता लिदा पत्रकार|लाईनै हसाएरै मूर्छा पारेर लोतपोत पारिन ।
सायद टिकटकमा भाईर`ल मध्ये यि नानीको जस्तो टयालेन्ट अरुमा भेटाउन गाह्रै हुन्छ यसैबिच शिशिर भण्डारी`सँग भेट्दा उनले अन्त`र्वार्तामै शिशिर`लाई थकाईन् । अभिनय गर्दै उनले शिशिरलाई के भनिन् ? पल शाहको फ्यान बताउने मयु`रको गज्जबको कला हेर्नुस…
Prevदेउवालाई ७ चोटि प्रधान-मन्त्रीको भविष्यवाणी गर्ने ज्योतिषको नेताहरुले गरे खोजी
Nextरोपाइँमा खिचिए यस्ता दृश्य, जुन बने टिकटकमा भाईरल (हे`र्नुस् भिडियो)
मास्क धोएर लाउन मिल्छ ? दिनदिनै नयाँ लगाउने की एउटै लगाइरहे हुन्छ ? थाहा पाउनुहोस्
आज कुन जिल्लामा कति संक्रमित भेटिए ? हेर्नुहोस् पूरा विवरण
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (132848)